Ny Vivo X23 dia hikapoka magazay amin'ny loko telo samy hafa | Androidsis
Ny Vivo X23 dia havoaka amin'ny loko telo samy hafa
Tao anatin'ny andro vitsivitsy, Ny 6 septambra izao dia haseho amin'ny fomba ofisialy ny Vivo X23. Io no telefaona vaovao avy amin'ny mpanamboatra sinoa, izay manavao ny faritra maromaro ho an'ity fararano ity. Tao anatin'izay herinandro izay dia efa nahazo antsipiriany ampy momba ity fitaovana ity isika. Ankehitriny, manana vaovao vaovao izahay, izay manamafy ihany koa fa halefa amin'ny loko telo izy io.
Ny Vivo X23 dia efa niseho indroa tao amin'ny tranonkala an'ny orinasa. Noho io dia afaka nahafantatra bebe kokoa momba ny telefaona izahay. Amin'ity tranga ity, ireo kinova izay havoaka amin'ny magazay.
Araka ny efa nolazainay, antenaina fa hisy loko telo karazana amin'ity fitaovana ity. Ny kinova dia hamely fivarotana amin'ny anarana mahaliana sasany. Ireto avy ireo: Volomparasy Phantom, Magic Night ary Phantom Red. Ireo no safidy tsy maintsy safidin'ny mpanjifa.
Ny kinova voalohany an'ity Vivo X23 ity dia maodely amin'ny loko volomparasy, misy akony gradient, manomboka amin'ny volomparasy ka hatramin'ny fuchsia. Ny faharoa amin'ireo kinova dia feo manga, somary maizina, raha ny filokana fahatelo kosa dia mena miloko mena, izay mazava sy manaitra indrindra. Fomba telo tena samy hafa samy hafa.
Ireto variana telo ireto dia niseho tamin'ny tranokalan'ny orinasa. Ka, Toa tsy hisy loko hafa ho an'ity Vivo X23 ity. Ny marika sinoa dia nisafidy loko manaitra kokoa, hisorohana ny alokaloka toy ny volondavenona na mainty, izay mazàna be matetika amin'ny telefaona.
Miaraka amin'ity Vivo X23 ity, manantena ny hanomboka hanana fanatrehany iraisam-pirenena ny orinasa. Ny fitaovana dia miavaka amin'ny famolavolana azy miaraka amin'ny mari-pahaizana amin'ny endrika rano mitete iray, izay hitantsika be eny an-tsena tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Ahoana ny hevitrao momba ireo loko isan-karazany ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Vivo X23 dia havoaka amin'ny loko telo samy hafa
Ny fampahalalana sy ny loko isan-karazany an'ny Sony Xperia XZ3 dia tafaporitsaka alohan'ny hanombohany